Sikubonisa indlela yokuvula iwijethi yeWhatsApp kwi-Android | Iindaba zeGajethi
Uyongeza njani iwijethi yeWhatsApp kwiscreen sokuvala kwi-Android
Umbulali weviniga | | Android, Iiselfowuni, WhatsApp
Ukuze usebenzise eli nqaku libalulekileyo njengokukwazi ukubeka iwijethi kaWhatsApp kwisikrini sokuvula Ukufikelela ngqo kwimiyalezo yakho, kufuneka ube ne-Android 4.2 okanye ngaphezulu, kuba ikwezi nguqulelo apho iiwijethi zixhaswa khona.
Gcina ukhumbula ukuba xa uvula le widget yeWhatsApp, nabani na onokufikelela kwifowuni yakho Uyakwazi ukufikelela kwimiyalezo evela kwisicelo sakho somyalezo owuthandayo, ke yinto ekufuneka uyazi kwangaphambili.Baninzi Sebenzisa iifowuni ze-Android ukunxibelelana ngokusebenzisa inkonzo yemiyalezo eyaziwayo ebizwa ngokuba yiWhatsAppKe ngoko, ukukwazi ukufikelela kwisicelo kwangoko xa isixhobo sivuliwe kunokuba kubalulekile kwabanye.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile ukwenza iwijethi isebenze kukuya kuseto kwi-WhatsApp kwaye kwicandelo lezaziso kusebenze kwi "Popup notification" ukhetho "Ngalo lonke ixesha bonisa into yokungena". Ngale nto, uya kufumana iscreen ukuze uvule umyalezo obuzwayo, ushiyekile kwiscreen sokuvula ngexesha elizayo xa uvula.
1 Kwi-Android ngokomgangatho
2 Izixhobo zeGalaxy
UKUBA une-Android ngokomgangatho kuzo naziphi na izixhobo ze-Nexus okanye kwi-AOSP ROM, unako sebenzisa iwijethi kwiscreen sokutshixa ka-WhatsApp.
Kuqala kufuneka uye kuseto> Ukhuseleko nakwinqanaba lokhuseleko kwescreen, yenza ukuba isebenze ukhetho ukwenza iiwijethi.
Ngoku kufuneka uye kwiscreen se-terminal kwaye ukusuka embindini wenze umqondiso wecala. Uya kubona uphawu. Cofa kuyo kwaye ukhethe i-WhatsApp kuluhlu oluza kuvela.
Ngexesha elizayo uvula isixhobo, iwijethi yeWhatsApp iya kuvela. Ukuba nangasiphi na isizathu unesinye iwijethi kwiscreen sokukhiya, ungakhetha ukuba yeyiphi ofuna ukubonakala njengeyona iphambili ngalo lonke ixesha uvula i-terminal.
Ukuba unayo isixhobo esiliGlass esinohlobo olutsha ukusuka kwi-Android unokufikelela kwiwijethi njengohlobo oluqhelekileyo lwe-Android.
Yiya kuseto> Ukutshixa isikrini> Izinketho zokutshixa isikrini kwaye wenze iindlela ezimfutshane, emva koko ucinezele apho ithi iindlela ezimfutshane kwaye ukhethe u-WhatsApp kuluhlu.
Inketho enomdla kwabo kufuneka ufikelele ngokukhawuleza kwimiyalezo ukusuka kuWhatsApp ngaphandle kokuya ngamanyathelo angaphambili okuvula usetyenziso kwaye emva koko uye kwibar yesaziso yokufikelela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Uyongeza njani iwijethi yeWhatsApp kwiscreen sokuvala kwi-Android
Uyicwangcisa njani i-BIOS ukuthintela ukufikelela kwiWindows
Eminye yemiyalelo eluncedo kakhulu kwi-OS X yesiphelo kwiMac